Ezra anosvika kuJerusarema (1-10)
Tsamba yaAtashasta kuna Ezra (11-26)
Ezra anorumbidza Jehovha (27, 28)
7 Pashure pezvinhu izvi, panguva yaitonga Mambo Atashasta+ wePezhiya, Ezra*+ akadzoka. Aiva mwanakomana waSeraya,+ mwanakomana waAzariya, mwanakomana waHirikiya,+ 2 mwanakomana waSharumu, mwanakomana waZadhoki, mwanakomana waAhitubhu, 3 mwanakomana waAmariya, mwanakomana waAzariya,+ mwanakomana waMerayoti, 4 mwanakomana waZerahiya, mwanakomana waUzai, mwanakomana waBhuki, 5 mwanakomana waAbhishua, mwanakomana waFiniyasi,+ mwanakomana waEriyezari,+ mwanakomana waAroni+ mutungamiriri wevapristi. 6 Ezra uyu akabva kuBhabhironi uye aiva munyori ainyatsoziva Mutemo waMozisi*+ wakanga wapiwa naJehovha Mwari waIsraeri. Mambo akamuitira zvese zvaakakumbira, nekuti ruoko rwaJehovha Mwari wake rwaiva paari. 7 Vamwe vaIsraeri, vapristi, vaRevhi,+ vaimbi,+ varindi vepamagedhi,+ nevashandi vepatemberi,*+ vakakwidza kuJerusarema mugore rechinomwe raMambo Atashasta. 8 Ezra akasvika kuJerusarema mumwedzi wechishanu, mugore rechinomwe ramambo. 9 Akasimuka kuBhabhironi pazuva rekutanga remwedzi wekutanga, akasvika muJerusarema pazuva rekutanga remwedzi wechishanu, nekuti ruoko rwakanaka rwaMwari wake rwaiva paari.+ 10 Ezra akanga agadzirira mwoyo wake* kuti aone kuti Mutemo waJehovha unotii uye kuti auchengete,+ uye kuti adzidzise mirau yawo nemitongo muIsraeri.+ 11 Aya ndiwo mashoko aiva mutsamba yakapiwa naMambo Atashasta kuna Ezra uyo aiva mupristi uye munyori, murume aiva nyanzvi pakudzidza murayiro* waJehovha nemirau yake kuna Israeri: 12 * “Atashasta,+ mambo wemadzimambo, kumupristi Ezra, munyori weMutemo waMwari wedenga: Iva nerugare. 13 Ndapa murayiro wekuti munhu wese ari muumambo hwangu wekuvanhu veIsraeri nevapristi vavo nevaRevhi anoda kuenda newe kuJerusarema ngaaende.+ 14 Nekuti watumwa namambo navanachipangamazano vake vanomwe kuti unoongorora kuti Mutemo waMwari wako wauinawo* uri kutevedzerwa here muJudha nemuJerusarema, 15 uye kuti utore sirivha negoridhe zvakapiwa nekuzvidira namambo navanachipangamazano vake kuna Mwari waIsraeri, uyo anogara muJerusarema, 16 nesirivha yese negoridhe zvaunogamuchira* mudunhu rese reBhabhironi pamwe chete nechipo chinopiwa nevanhu nevapristi vachizvidira kuimba yaMwari wavo iri muJerusarema.+ 17 Uye unofanira kukurumidza kushandisa mari iyi kutenga mikono yemombe,+ makondohwe,+ makwayana,+ pamwe chete nemipiro yazvo yezviyo*+ nemipiro yazvo yezvinwiwa+ uye unofanira kuzvipisira paatari yeimba yaMwari wenyu muJerusarema. 18 “Uye itai chero zvakanaka kwamuri, iwe nehama dzako, muchishandisa sirivha negoridhe zvinenge zvasara, maererano nezvinodiwa naMwari wenyu. 19 Uye midziyo yese yaunopiwa yebasa reimba yaMwari wako unofanira kuiisa pamberi paMwari wako kuJerusarema.+ 20 Zvimwe zvese zvinodiwa paimba yaMwari wako zvaunofanira kupa, uchazvitora munochengeterwa pfuma yamambo.+ 21 “Ini Mambo Atashasta ndapa murayiro kuvachengeti vese vepfuma vari munharaunda iri Mhiri kweRwizi,* kuti zvinhu zvese zvamunokumbirwa nemupristi Ezra,+ munyori weMutemo* waMwari wedenga, mupei nekukurumidza, 22 kusvika pamatarenda* 100 esirivha, makori* 100 egorosi, mabhati* 100 ewaini,+ mabhati 100 emafuta,+ nemunyu+ chero waanoda. 23 Zvese zvinorayirwa naMwari wedenga zvine chekuita neimba yaMwari wedenga+ ngazviitwe nekushingaira, kuti vanhu vemuumambo hwamambo nevanakomana vake varege kutsamwirwa.+ 24 Uyewo zivai kuti hazvibvumirwi kubhadharisa mutero wevanhu, mutero wezvinhu,+ kana mutero wenzira kuvapristi chero vapi zvavo nevaRevhi, vaimbi+ nevaya vanoridza zviridzwa, vachengeti vemasuo, vashandi vepatemberi,*+ nevashandi vepaimba iyi yaMwari. 25 “Uye iwe Ezra, maererano neuchenjeri hwawakapiwa naMwari wako,* gadza vaongorori vemhosva nevatongi kuti vatonge vanhu vese vari munharaunda iri Mhiri kweRwizi, vaya vese vanoziva mitemo yaMwari wako; uye munofanira kurayiridza munhu wese asingaizivi.+ 26 Munhu wese asingachengeti Mutemo waMwari wako nemutemo wamambo, anofanira kutongwa nekukurumidza, kungava kutongerwa rufu, kudzingwa, kubhadhariswa mari kana kuiswa mujeri.” 27 Jehovha Mwari wemadzitateguru edu ngaarumbidzwe, uyo aisa pfungwa idzi mumwoyo mamambo kuti anakise imba yaJehovha iri muJerusarema!+ 28 Uye andiratidza rudo rusingachinji pamberi pamambo+ navanachipangamazano vake+ nemachinda ese ane simba amambo. Ndakabva ndashinga* nekuti ruoko rwaJehovha Mwari wangu rwaiva pandiri, uye ndakaunganidza varume vaitungamirira pavaIsraeri kuti ndiende navo.
^ Kureva kuti “Rubatsiro.”
^ Kana kuti “uye aikopa Mutemo waMozisi neunyanzvi.”
^ Kana kuti “akanga azvipira mumwoyo make.”
^ Kana kuti “aikopa mashoko emurayiro.”
^ ChiAramaiki ndicho chakatanga kushandiswa pakanyorwa Ezr 7:12 kusvika ku7:26.
^ ChiAram., “uri muruoko rwako.”
^ ChiAram., “zvaunowana.”
^ Kana kuti “Mhiri kwaYufratesi.”
^ Kana kuti “uyo anokopa Mutemo.”
^ Kana kuti “vaNetinimu.” ChiAram., “vanhu vakapiwa,” kureva kuti vakapiwa sezvipo.
^ ChiAram., “maererano neuchenjeri hwaMwari wako huri muruoko rwako.”
^ Kana kuti “ndazvisimbisa.”